Abanye abavelisi kunye nababoneleli | China Abanye Ifektri
Amacandelo esinyithi e-Diamond okusika okanye okusila ikhonkrithi kunye namatye
Amacandelo edayimani esinyithi asetyenziselwa ukusika okanye ukugaya ikhonkrithi kunye neebhloko zamatye. Zenziwe ngefomula eyahlukileyo. Amasuntswana edayimane anamandla aphezulu, ubuninzi obuphezulu, ukunganyangeki okubukhali kunye nobomi obude. Amacandelo esinyithi ayafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu, udaka kunye nezinto zokuncamathelisa zingenziwa ngokwezifiso.
3, Ez Guqula HTC nentlaka Pad samandla
I-adapter ye-HTC EZ yokutshintsha ngokukhawuleza iiphedi zokucoca i-resin kumatshini we-HTC. Unokuguqulwa ukuba usetyenziswe kumatshini ohlukeneyo wokusila kunye nokucoca. I-nylon quilt yenzelwe ukunamathela ngokuqinileyo kulusu, kwaye ayinakonakaliswa ziinyembezi eziphindaphindwayo. Isebenziseka lula, ngokufanelekileyo nangeendleko.
I-5 intshi ye-M14 Umsonto weDayimani yokuPolisha iiPads zePacked Aluminium Umqolo wePads yeAngle Grinder Adapter
I-5inch i-M14 i-Thread ye-Diamond yokuCoca iipakethe zePakethe ye-Aluminium ye-Backer Pads ye-Angle Grinder Adapter. Ukubonelela ngeenkonzo zokwenza ngokwezifiso ukufezekisa naziphi na iimfuno ezizodwa.
Intlaka ipleyiti umnini velcro yerabha baxhaswa iphedi 4 ″, 5, 7 ″
I-Resin ipolishi yokubamba iphedi ye-velcro yerabha yokuxhasa isetyenziselwa ukudibanisa ipeyinti yokupholisha kwi-angle grinder. Sikwabonelela ngeenkonzo zokwenza ngokwezifiso ukufezekisa nayiphi na imfuneko ekhethekileyo.
Iibhanti zeCarbide Bush Hammer Roller Bits zamatye kunye nomphezulu weKhonkrithi
Amatye e-Carbide Bush Hammer Roller Bits ngamatye kunye nomphezulu wekhonkrithiUkuze wenze umhlaba ube rhabaxa kwaye ungatyibiliki, njenge-litchi yokugqiba umphezulu.Ukunxiba kakhulu ukunxiba kunye nobomi obude.Umlo kunye nokusebenza kakuhle. Isiseko se-hammer roller isiseko singenziwa ngonxibelelwano olwahlukileyo ilingane koomatshini abohlukeneyo.
I-Lavina Diamond Bush Hammer Roller zokwenza ikhonkrithi kumphezulu ombi
I-Diamond Bush Hammer roller yenza umhlaba ube rhabaxa kwaye ungatyibiliki, njengelitchi eligqibezela umphezulu.Ungayenza kunye okanye ngaphandle kweplate.Senza izigaqa ezahlukeneyo zehammer zamatyholo kuzo zonke iintlobo zoomatshini bokugaya, njengoLavina, Husqvarna, HTC, Terrco , njl. Sikwabonelela ngeenkonzo zokwenza ulwenziwo.
Marble Granite eziphathekayo Corner Ukusila Izixhobo Bit for Corner Grinder
Diamond ikona izixhobo zokulola zisetyenziselwa ukulola iikona, izinyuko, phantsi kweekhabhathi, iirves, iincam ezibukhali, njl Ukulungela ukugaya zonke iintlobo zemigangatho yesamente kunye nemiphezulu yamatye. Ukuchaneka kokuchaneka okuphezulu kwenza umgangatho wobunjani ulunge emva konyango. ukusebenza kokugaya okuphezulu.